Donye ka ị họọrọ: Ubuntu, Debian, ma ọ bụ ha abụọ? | Site na Linux
via RSS, site na otu isiokwu na Com-SL Achọpụtara m banyere nyocha a na-eme na nzukọ a Mint Linux na ihe si na ya pụta (Ruo ugbu a) Ana m egosi n’okpuru.
Amaghị m ókè nyocha a ga-aba uru, ọkachasị ebe onye ọ bụla so n'òtù mmepe nke Mint Linux, ma ihe ndị si na ya pụta ugbu a adịghị eju m anya. Agaghịkwa eju m anya ma ọ bụrụ na onye ọ bụla so na ya Team de Mint Linux.
M na-na na kwuru na LMDE na-enweta ebe dị mkpa na Obodo Mint Linux ọ gaghị abụrịrị m ihe ijuanya ma ọ bụrụ na n'oge ụfọdụ, n'ọdịnihu dị nso, ọ ga-abụ ọkọlọtọ nke nkesa a.
Enwere m ntuli aka Debian, dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ọtụtụ ihe kpatara m. Kedụ nke ị ga-ahọrọ? Nke a bụ nyocha njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Donye ka ị họọrọ: Ubuntu, Debian, ma ọ bụ ha abụọ?
Ihe a na-atụ anya site na distro dịgasị dabere na ojiji a ga-eme ya, dị ka mmeghe mmeghe na ụwa Gnu-linux M ga-ahọrọ Mint dabere na Debian, ọ bụrụ na emesịa ọ pụta na linux mere ka ị kwenye na ị masịrị ya, m ga-enye ya gaa na Debian Testing maka desktọọpụ distro.
Daalụ maka isiokwu ¡¡¡ekele
Ọ bụ ihe na-eme m. M wụnye LMDE mana m na-ejedebe na ntinye na Debian dị ọcha na enweghị etemeete. 😀
"Elementary my Watson nke m hụrụ n'anya" Debian maka onye ọ bụla.
Amaghi m ihe m ji ju aju hahahaha
Maka nkà ihe ọmụma na nkwanye ùgwù, m na-ahọrọ GNU / Linux Debian (ọkachasị maka sava) mana dị ka onye ọrụ Ubuntu. Nyocha ahụ siri ike ma ugbu a, m na-eji Ubuntu + Xfce4 😀
Enwere m ike ịgwa gị na ozugbo ị mụtara GNU / Linux ntakịrị, onye ọrụ njedebe ọ bụla nwere ike ime Debian ka Chineke zubere na enweghị ihe ị ga-enwe anyaụfụ Ubuntu, ma ọ bụ ka mma, jiri LMDE, ọkachasị na Xfce ...
Dị ka onye ọrụ njedebe, ana m ekwusi ike na Ubuntu na-eme ka ọrụ anyị dị mfe, site na ntinye nke ndị ọkwọ ụgbọala n'ụzọ ojiji; ugbu a ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere onye ọrụ na nkezi ihe ọmụma, ee, debian ga-abụ ihe kasị kwesị ekwesị oke.
Akwadoro m ndị enyi m na ezinụlọ m, mana m na-aga n'ihu na Ubuntu, mgbe ị na-etinye ya ọsịsọ iji, cheta na na debian enwere mgbe ma ọ bụ oge ọzọ iji ọnụ maka nkeji ole na ole. .
Irwin Manuel Ọganihu Gamez dijo
N'ezie, Debian na-arụ ọrụ dị ukwuu na LMDE, mana ụdị 7 nke debian ga-ewepụ LMDE?
Zaghachi Irwin Manuel Boom Gamez
Aghọtara m echiche gị ma ọ na-atọ ụtọ. Mana na Debian ihe ọchọsi ike na-eme, na ọ bụ ihe m yiri, ọ na-emetụta eziokwu ahụ na ọ bụghị otu n'ime nkesa ndị kachasị ewu ewu maka onye ọrụ njedebe: Debian anaghị egbu ọdịdị nke Gnome. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Debian na-etinye Gnome ka ndị mmepe na-anapụta ya, ọ bụkwa ebe ahụ ka ọdịiche dị na Mint, na ọ dịkarịa ala, ha na-ewepụta oge ha iji mepụta ihe osise mara mma nke onye ọrụ njedebe.
Nkwụsi ike na ọsọ nke Linux Mint dabeere na Debian dị ịtụnanya, yabụ votu m bụ maka Debian.
O nwere otu ihe kpatara m ... 😀
Ọ dị mma ịhọrọ votu? hahaha Nah n'ezie Debian dika osisi oak.
Enweghị m ike ịtụ vootu na ntuli aka ahụ ... n'ihi na enweghị nhọrọ na-ekwu, sị: "LinuxMint ma ọ bụ LMDE anaghị amasị m" ... LOL !!!
O nwere ike ịbụ n'ihi na nyocha ahụ abụghị maka ndị ọrụ Arch? Gini mere na enweghi ntuli aka na Arch forums nke na-ekwu, sị: Ọ ga - aka gị mma ma ọ bụ LMDE?
Claaro, Arch enweghị alaka abụọ ma ọ bụ nwee ntọala. Ma onye ọ bụla bịakwutere m na Crux ga-abụ onye isi
Ubuntu na-acho m.
Ekwela ka m raara m nye Arch na Fans Debian n'ihi na ọ masịrị m Ubuntu na m na-ekwu site na Windows.
O ghaghi iju m na i jiri Ubuntu
Ọ na-eju m anya na ị kwuru nke ahụ, eziokwu
Chei ogologo oge 😀
HAHAHA nah, ama m na unu bụ ndị Photoshop Fans, ị gwara m na mbụ na Gimp anaghị amasị gị yabụ echere m na Linux + Wine + PS ma ọ bụ naanị Windows + PS bụ nhọrọ gị 🙂
Ndewo Rena Renata 😉
Enweghị m mmasị Renata nke ukwuu ọzọ. Ọ bụ troll, ọ bụ misanthropic, ọ bụ gnomera na ọ kpọrọ asị Obi ike, mana (mgbe niile mana) na-eji Ubuntu ufff
Rena troll? mm echeghị m ... haha, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ, bịa na ọtụtụ ihe karịa gị onye ọ bụla, n'eziokwu ị fọrọ nke nta ka ị were ọnọdụ nke Official Troll No.1 si obi ike HAHA.
Misanthropic? Bịa, ị ga-agwa m na ụmụ mmadụ bụ agbụrụ kasị mma na nke ziri ezi na mbara ụwa? ¬_¬… Agaghị m ekwu ihe m chere maka na nke a abụghị saịtị ndọrọ ndọrọ ọchịchị / blog, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ, enwere m ọtụtụ ihe atụ iji nye gị ma gosi gị na squir dị mma n'ọtụtụ ụzọ karịa mmadụ.
Gnomera, yep jiri Gnome, dị ka ị ziri ezi?
NA HAHAHAHA ị kpọrọ asị obi ike? HAHAHA Amaghị m, m ga-asị na ọ kpọghị ya asị, naanị nke ahụ (ọ bụ ihe m chere, na ọ gaghị abụ ihe ọ na-eche n'echiche) Echeghị m na ọ bụ onye nsọ nke ntinye ya HAHAHAHA.
N'ezie echere m na ị dere post ahụ ezighi ezi, ọ bụ na ị sịghị:
Achọghịzi m Renata asị nke ukwuu. Ọ bụ troll, ọ bụ misanthropic, ọ bụ gnomera na ọ kpọrọ asị Obi ike, mana (mgbe niile mana) na-eji Ubuntu ufff
Dị ka ị maara
Na onye ọ bụla nwere mkpịsị aka abụọ nke ọkpọiso ga-ekwenye na m
Mba, edere m nke ọma, enwere m mmasị na ya n'ihi na ọ bụ ihe egwuregwu, ọ bụ misanthropic, ọ bụ gnomera na ọ kpọrọ asị Obi ike ma ugbu a ọ bụghị nke ukwuu n'ihi na ọ na-eji gnome
Onweghi mgbe m kwuru ihe ọ bụla megide misanthropes (n'ihi na m), ma ọ bụ megide gnomers, ma ọ bụ megide trolls 😀 m asị onye iro m iti ke ọnọdụ nke troll. Echere m na ọ bụ ihe doro anya na okwu m gara aga na enweghị m mmasị na ya nke ukwuu, maka iji Ubuntu. (Know ma buntus amịrị), ihe m na-ekwu bụ na ị naghị ejide ụzọ m si awakpo ubuntu site na ịga ije.
Were na-abịaghị n'oge ịhụ ihe mere m na Renata, e wezụga na ọ jọghị njọ na m rịọrọ ya mgbaghara site na mail. Echekwara m na ọ bụ enyi nwanyị aja.
Site n'ụzọ, ọ dị ụkọ na enweghị ubunto ebe a
HAHAHAHA nope, ana m agbachitere Rena na Gabriela n'ihi na enwere m ekele maka ha, ha bụ ezigbo mmadụ, mana enyi m nwanyị abụghịkwa, ma ọ bụghị LOL !!
Ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ LMDE na-agụ anyị karịa ndị ọrụ LM-Ubuntu 🙂
O doola m anya na pasent ị nyere m na ohere m na-eso ndị ọzọ HAHAHA
Cewento !!!! n'ihi na ọ na-eji ubuntu, ọ bụghị n'ihi na ọ na-eji gnome, ọ ga-abụrịrị na n'elekere atọ nke ụtụtụ, adị m okpukpu abụọ karịa nke enweghị ntụpọ karịa n'oge awa ndị ọzọ.
Ekwenyere m na LinuxMint enweela, dị ka otu n'ime isi ya, na-agbakwunye ụfọdụ ngwaọrụ na ịmecha nkọwa ụfọdụ (nke ọrụ na ọdịdị) nke na-anọghị na nrụnye Ubuntu ndabara, echiche a niile iji nye ahụmịhe ka mma na onye ọrụ ikpeazụ. .
Kaosinadị, na mbata nke Unity, yana mkpebi LM ịghara ịgbaso ụzọ ahụ, ihe esiri ya ike. Obi abụọ adịghị m na na obere oge LMDE ga-akwụsị ịbụ alaka ụlọ ọrụ ọzọ wee bụrụ isi ya. Ya mere, enwere m echiche na nyocha ha malitere amalite na-achọ nyocha ma ndị ọrụ ga-akwado mkpebi ahụ.
Ọ bụrụ na m cheta n'ụzọ ziri ezi ... na ịbụ onye "nka" (ma ọ bụ m eme ka à ga-asị na ọ bụ xD) UbuntuStudio na-agakwa Ubuntu na Unity na Gnome3 (onye m na-ahụ nke ọma, ọ bụ naanị m bụ onye naanị na mbara ala / eluigwe na ala na onye na-enwe mmasị na ihe abụọ LOL) na ndị mmepe UbuntuStudio ga-agbado usoro ahụ ọbụna na Ubuntu, mana ya na Xfce ... Enwere m olile anya, ịbụ nrọ na-adịghị anya, na ha kwụsịrị ịdabere na Ubuntu ma mee ya na Debian (DebianStudio ... Achọrọ m ụda nke xD ma ọ bụ na LMDE (MintStudio… yay: D)
Ekwuru m ya, n'ihi desktọọpụ ahụ abụghị m nke na Ubuntu na-alụ ọgụ (oh, mana ịhụnanya m maka obere mkpanaka na otu esi mara desktọpụ Xfce nwere ike ijide m ọzọ) Mana enweghị obi abụọ, yana ugwu (otu m si hụ ya n'ezie) na Mint merie ... ọ kwesịrị ịdabere na Debian wee weghachite ndị nrụnye ya na desktọọpụ niile dị ka ọ dị na mbụ (GNOME maka onye ọ bụla masịrị gị, Xfce, KDE, Flubox na gịnị kpatara ya, nzọ na ndị ọzọ ma ọ bụ nye nhọrọ ịhọrọ gburugburu ebe anyị chọrọ site na ndụ-dvd, Achọrọ m iche na ọbụlagodi na ọ bụ anụ ọhịa nke 4 gigs na onye ọ bụla ma ọ bụ nke a na-ere ọkụ na dvd ma ọ bụ na-agbago na eriri)
Mana dịka m kwuru, nrọ Guajiro dị ka anyị na-ekwu ebe a na Mexico xD
Nwa agbọghọ a na-amasị m karia .. ana m agwa gị hahaha. Odi nma, lee gi anya, adighi m acho Unity ma obu Gnome3 ma, ahuru m oke dika gi. Ọbụna m raara onwe ya nye blog na WordPress na oge ụfọdụ gara aga.
M na-ekekọrịta echiche na LM kwesịrị ịkwaga Debian, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ na-eme, ejiri m n'aka na ọ ga-atụfu ọtụtụ ndị ọrụ na-amasị Ubuntu karịa Ubuntu ...
Ọ ga-amasị m ịnweta diski mbụ site n'aka onye na-ekesa, ebe ọ bụ na Madrid anaghị atọpụ sistemụ ndị dị na mpaghara Spanish ma ọ bụ mpaghara. Ha chọrọ ka anyị jiri Windows na ihe ndị ọzọ ma, ya mere, sava linux bụ ndị umengwụ ma ọ bụ ndị ngwụrọ. Anyị nwekwara enweghị ike nke ngwanrọ na-enweghị ego na obodo a na, n'ihi ihe doro anya, ego ezughị ezu iji dịrị obi umeala. N'etiti gọọmentị Spain na nke Obahama, ọ dị ka ụgbọ mmiri anyị na-eme njem bụ ụlọ mkpọrọ.,….
Seta desktọọpụ gị na .GIF na Byzanz